Shenzhen Sunveytech Co.,LTD [Guangdong,China] Business Type:Manufacturer Main Markets: Americas , Europe , Worldwide Exporter:71% - 80% Certs:CE, FCC, RoHS Tsanangudzo:Pamusoro License Plate Kamera,Mount License Plate Kamera,License Plate Reverse Kamera
Home > Products > Mota Backup Kamera > License Plate Backup Kamera > Mount License Plate Backup Kamera
Muenzaniso Nha.: SV-7177H8
Car Backup Kamera, License Plate Backup Kamera ine HD Mufananidzo Waterproof uye Wide View Angle Reverse Rear View Kamera yeCars Pickup Matiraki Jeep SUV RV
[ High Image Quality ] Iine HD Lens uye 170 ° Super Kuona Angle , iyi backup kamera yakakwanira zvakakwana yekumashure-yekutarisa yekuvhara pasina mufananidzo kukanganisa. Iyo mirayiridzo yekupaka inoyambira nezve chipingamupinyi chiri kusvika kuitira kuti usave neshungu nezvekupaka mukadzi wako wega.
[ Hapana Bofu nzvimbo ] Kana uchityaira mota hombe senge van, SUV kana pickup, ine mavara akakura emeso, maziso akasarudzika kumashure kwako anokupa chivimbo chakawedzerwa kana uchitsigira. Back-up kamera inouyawo inobatsira kana iwe uchikwevera turera kana chikepe.
[ Inokodzera Yakawanda Mota ] Iyo kamera inogona kubatana neaya waya yeiyo toni yakanyanya. Iyo vhidhiyo inotumirwa inopihwa kuburikidza neakapihwa RCA tambo iyo inogona kuvanzika zvinyoro pasi peketeki yemotokari kuti usakanganise kutaridzika kwemotokari yako. Iyo 30ft RCA tambo yakareba zvakakwana kuti igare mota zhinji.
Kuiswa Nyore] Car backup kamera haidi kudhirowa panguva yekukwira sezvo ichifanirwa kunge yakarongedzwa kune iripo peturu mapaha maburi. Magadzirirwo ebhureki akavanzika haazovhara chero ruzivo pane yako rezenisi peturu. Ita shuwa kutevedzera nemitemo yenyika imwe neimwe.
License Plate Reverse Kamera